Kambodza: Manao Fihetsiketsehana Hiarovana ny Ala ny ‘Avatar’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Français, Español, Svenska, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Niakanjo sy nihaingo tahaka ny foko Na'vi ao amin'ilay sarimihetsika Avatar, nanohitra ny tetikasa fanadiovana ny ala Prey Lang izay hosoloina toera-pambolena sy toera-pitrandrahanana ny tambanivohitra Kambodziana. Prey Lang no ” ala lehibe midadasika indrindra eo amin'ny tany lemaka sy sisa tavela ao Kambodza sy ny saikanosy Indoshina.”
Tsy isalasalana fa Prey Lang no faritra tsara midadasika indrindra amin'ny tanin'ny mponina ao an-toerana sy sisa tavela ao Kambodza. Miorina eo amin'ny Mekong sy Stung Sen Ricers izy, ary misandrahaka amin'ny faritany efatra (Preah Vihear, Kampong Thom, Kratie ary Stung Treng.)
Manodidina ny 200.000 eo ny mponina ary ny ankamaroany dia indizeny Kuy (tononina hoe Koo-ie), izay monina amin'ny tanàna 339 avy amin'ny distrika enina manodidina ny ala. Vahoaka hatramin'ny 350.000 no monina ao amin'io faritra mahafinaritra Prey Lang io.
"Mivavaha hatrany ho an'ny Prey Lang" Fankalazana noho ny ala voavonjy, sary avy amin'ny http://ourpreylang.wordpress.com/
Nampiasain'ny mpanao fihetsiketsehana ‘Avatar’ tanteraka ihany koa ny tahalan-tserasera mba ahazoana fanohanana maro amin'ny fanentanana ataon'izy ireo. Ankoatra ny fangatahana natao an-tserasera mba hiarovana ny ala, napetraka ihany koa ny bilaogy mba hanomezana vaovao farany ho an'ny vahoaka mikasika ireo hetsika sasany tahaka ny fotoam-pivavahana sy ny fizarana trakitra.
Amin'ny anaran'ny Tambazotra Prey Lang, navoitran'ny Ivon-toerana Kambodziana Mpiaro ny Zon'ny Olombelona ny hevitr'ireo mponina izay mety ho fadinarovana raha toa ka horavana ny ala Prey Lang.
Minh Ny ao amin'ny Prey Lang: “Tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana milamina natao, inoako fa hitahiry ny ala Prey Lang ho an'ny taranaka any aoriana isika ary ampahafantatra ny fampahalalam-baovao sy ny vahoaka ny amin'ny mahazavadehibe ny ala eo amin'ny fiainan'ireo mponina izay monina miaraka amin'izany sy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. “
Phok Hong, indizeny Kuy avy ao Prey Lang: “Raha tsy manana Prey Lang intsony aho, dia ho very. Isan'andro aho dia miahiahy ny amin'ny fanjavonan'ny Prey Lang. Miahiahy aho sao hosimban'ny mpitrongo tany sy ny orinasa izany ka ho very ny lalam-piainako. Raha tsy manana Prey Lang intsony izahay dia tsy manana ala, ny fitsaboana amin'ny alalan'ny ravinkazo (raokandro), fiainan-dia ary indrindra indrindra ny fomba amam-panao izay efa nolovain'ny taranaka maro nifadimby tamin'ny razambenay. Ankehitriny dia miangavy amin'izao tontolo izao aho mba hanome lanja ny maha-zavadehibe ny Prey Lang sy hanampy anay hamarana izao ady izao».
Seng Sokheng, solontenan'ny Fikambanan'ny Tambazotra “Filaminanana-fanamafisana: “Mbola tsy nisy hetsika lehibe tahaka izao, kanefa kosa tsy mampiseho tsara ny maha zavadoza ny fandrahonana atao manoloana ny Prey Lang izany. Na dia mety hanimba ny fiainana manontolo aza ny adin-tany, miteraka fiovan'ny tontolo iainana ary miantraika amin'ny taranaka mifadimby izay rehetra mikasika ny fanimbana harena voajanahary sy ny faritra be ala. Mahafinaritra tokoa ny mahita fiarahamonina iray mahay miray hina manohitra ny tsy rariny atao amin'ny ala ao an-toerana, ary indrindra ny fitantanana ny harena voajanahary.”
Nilamina ny fihetsiketsehana tamin'ny ankapobeny, saingy voasakan'ireo manampahefana ao an-toerana ny hetsika vao haingana notontosain'ny ‘Avatars’ miaro ny Prey Lang, hetsika fotoam-pivavahana Bodhista sy fizarana taratasy fanentanana. Olona mahery ny 100 no voasambotra nandritra ny fotoana fohy ary natao fanadihadiana, ary noafahana ihany izy ireo avy eo. Azo jerena ao amin'ny tranokala Kambodziana mpiaro ny zon'ny olombelona “Sithi” ny sary sy ny lahatsary misy ny fisamborana natao.
Fanadihadiana momba ny Prey Lang, “Ala Tokana, Hoavy Tokana”, notontosain'i Jocelyn sy Ben Pederick.
Iangaviana ireo rehetra izay manohana ny tolona ataon'ny fiarahamonina indizeny monina ao Prey Lang mba hanoratra taratasy ho an'ny governemantan'i Kambodza. Ity ambany manaraka ity ny santionan'ny karazana taratasy alefa any amin'ny Praiminisitra Hun Sen
Praiminisitra Samdech Hun Sen hajaina,
Manoratra aminao aho mba hiangavy anao hanao izay rehetra azonao atao hiarovana ny ala Prey Lang izay harena lehibe an'ny vahoaka Kambodziana, Azia Atsimo ary izao tontolo izao.
Mangataka aminao aho mba handray ireto fepetra manaraka ireto:
–Atsahatra ny fanomezana fambolena sy fitrandrahana atao ao amin'ny faritra Prey Lang
–Omena sata ho zavaboary voaaro ny Prey Lang ary hamafisina ny fiarovana azy
–Mamboly hazo indray amin'ny faritra efa nikapana hazo
–Manaiky hitantana io ala io amin'ny fotoana maharitra, miaraka amin'ny fiarahamiasan'ny Tambazotran'ny Fiarahamonina Prey Lang.